Ny Boeing 777-9 vaovao dia misidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Doha
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Ny Boeing 777-9 vaovao dia misidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Doha
Ny Boeing B777-9 vaovao dia misidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Doha.
Ny fiaramanidina, izay antenaina hanatevin-daharana ny fiaramanidina Qatar Airways atsy ho atsy, no fiaramanidina kambana lehibe indrindra sy mahomby indrindra eran-tany, manome 20 isan-jato ny fanjifana solika sy etona ambany noho ny fiaramanidina teo aloha.
Qatar Airways dia nandray ilay fiaramanidina faran'izay maoderina, mitsitsy solika mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Doha.
Ny 777-9 dia miorina amin'ny fianakaviana 777 sy 787 Dreamliner tian'ny mpandeha sy mpitarika ny tsena.
Hijanona ao Qatar ny fiaramanidina alohan'ny hiverenany any amin'ny Sahan'ny Boeing ao Seattle hanohy ny fandaharam-panadinana henjana.
Qatar Airways androany dia naneho ny andraikiny amin'ny maha-mpanjifa fandefasana manerantany ho an'ny taranaka farany Boeing fiaramanidina 777-9 taorian'ny nandraisany ilay fiaramanidina faran'izay maoderina, mitsitsy solika ho any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Doha (DIA).
Vahiny VIP maromaro no tonga nanatrika Qatar Airways Ny Tale Jeneralin'ny Vondrona, Andriamatoa Akbar Al Baker, dia handray anjara amin'ny fahatongavan'ilay fiaramanidina, izay hijanona ao Qatar alohan'ny hiverenany any amin'ny Sahan'ny Boeing ao Seattle hanohy ny fandaharam-panadinana henjana.
Ny fiaramanidina, izay antenaina hanatevin-daharana ny andian-tsambon'ny zotram-piaramanidina nahazo mari-pankasitrahana atsy ho atsy, no fiaramanidina kambana lehibe indrindra sy mahomby indrindra eran-tany, manome 20 isan-jato ny fanjifana solika sy entona entona ambany noho ny fiaramanidina teo aloha. Ny teknolojia manan-danja ahafahana manao izany fahombiazana izany dia ny elany vaovao mitambatra fibre karbônina, motera vaovao ary nacelles mikoriana laminar voajanahary.
Boeing Ny 777-9 dia miorina amin'ny fianakaviana 777 sy 787 Dreamliner tian'ny mpandeha sy mpitarika tsena mba hanomezana traikefa amin'ny sidina amin'ny ho avy. Ny mpandeha sy ny mpiasa dia samy hankafy ny haavon'ny kabine mahazo aina kokoa, ny hamandoana tsara kokoa, ny fandehanana milamina kokoa, ny kabine midadasika kokoa, ny varavarankely lehibe kokoa ary ny maritrano malalaka.
Qatar Airways Ny Lehiben'ny Vondrona, Andriamatoa Akbar Al Baker, dia nilaza hoe: “Tamin'ny taona 2013 no nanambaran'ny Qatar Airways Group ny fampiasam-bola nokasainy tamin'ny fiaramanidina farany an'ny Boeing.
“Rehefa avy nitsidika ny Boeing orinasa tao Everett, Washington tamin'ny volana septambra 2018, nanana fahafahana nijery akaiky ny 777-9 izahay, saingy izao no fotoana voalohany ho an'ny zotram-piaramanidina sy ireo vahiny VIP hajainay mba hanatri-maso ny fanoloran-tenanay lehibe amin'ity fiaramanidina tsy mampino eto Qatar ity. satria sambany vao tonga.
"Faly tokoa izahay fa mpanjifa fandefasana eran'izao tontolo izao ho an'ity vokatra mitarika amin'ny indostria ity, ary afaka maneho ny fanoloran-tenanay hanohizana ny fanohanana ny tambajotram-pifandraisana manerantany miaraka amin'ny andian-tsambo izay ahitana ny zandriny indrindra, mandroso indrindra amin'ny teknolojia ary mahomby. fiaramanidina maotera eto amin'izao tontolo izao."
Ny filoha sady tale jeneralin'ny Boeing Commercial Airplanes, Mr. Stan Deal, dia nilaza hoe: “Faly izahay noho ny fanoloran-tena maharitra ataon'ny Qatar Airways amin'ny 777-9 sy ny fiaraha-miasa sy ny fanavaozana asehony. Miaraka amin'ny fanatsarana tsy mbola nisy hatrizay teo amin'ny fahombiazan'ny solika sy ny entona ary ny fampiononana vaovao, dia manantena ny hahita ny 777-9 mampifaly ny mpandeha Qatar Airway izahay mandritra ny taona maro ho avy.